LA OGAADAY: Matthijs De Ligt Muhiimadiisa Koowaad Maaha Lacag & Balse Sababtan Ayaa Ah Mida Dhabta Ah Ee Uu Uga Caga Jiidayo Inuu Barcelona U Wareego. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Matthijs De Ligt Muhiimadiisa Koowaad Maaha Lacag & Balse Sababtan Ayaa Ah Mida Dhabta Ah Ee Uu Uga Caga Jiidayo Inuu Barcelona U Wareego.
Da’yarka kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt ayaa halkiisa kasii wata inuu shaqo adag galiyo kooxaha ugu waaweyn Yurub waxaana wali cirka ku shareeran mustaqbalkiisa oo ah midka ugu hadal haynta badan suuqa kala iibsiga.
De Ligt ayaa hore loola xidhiidhiyay kooxaha kala ah Juventus, Manchester Unitedd iyo Barcelona waxaana kooxdii ugu dambaysay ee si xoogan loola xidhiidhiyaa ay tahay Paris Saint-Germain.
Si kastaba, Hal koox ayaa u muuqata mid si dhab ah looga saaray tartanka waana kooxdii markii hore ugu cad cadayd saxeexiisa ee Barcelona oo filanaysay inay Camp Nou kula soo midayso Frankie De Jong oo ay hore Ajax ugala soo wareegtay.
Wariye Alfredo Martinez oo ah mid aad looga ixtiraamo gudaha dalka Spain ayaa dhawaan sheegay sababta uu De Ligt iskaga diiday inuu u wareego Camp Nou oo aan ahayn lacag.
Wariyahan oo ka hawl gala Onda Cero ayaa sheegaya in De Ligt uusan hubin inuu fursad ciyaareed ka heli doono Barcelona halkii uu ka fikiri lahaa lacag badan oo uu mushahar ahaan u qaato.
Iyadoo ay haatan Blaugrana booska daafaca dhexe u haysato xiddigaha kala ah Gerard Pique, Samuel Umtiti iyo Clement Lenglet ayuu da’yarkani u arkaa kooxdaas meel ku adkayn karta inuu horumar ka sameeyo xirfadiisa ciyaareed.
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis 11 Milyan ah sanadkii miiska u saartay da’yarkan iyaga oo sidoo kale kulan la qaatay wakiilka da’yarkan ee Mino Raiola.
Kooxaha xilli horeba quusta taagan ayay ugu horreysaa Manchester United oo markii hore awood dhaqaale isticmaalaysay balse ugu dambayn ka hadhay tartanka.
Waxa xaqiiqo ah in uusan jirin qof qof kale arrimihiisa musytaqbaleed la go’aamin kara balse 19 jirkan ayaa helaya talooyin badan oo ah inuusan farxad iyo horumar ku heli doonin haddii uu u wareego Paris.